अब मास्क नलगाई सार्व`जनिक स्थलमा हिँड्ने व्यक्तिलाई ५ हजार जरि`वाना !!! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /News/अब मास्क नलगाई सार्व`जनिक स्थलमा हिँड्ने व्यक्तिलाई ५ हजार जरि`वाना !!!
भारतको केरला राज्यमा अव`स्थित वयानाद प्रहरीले मास्क नलगाई सार्वजनिक स्थलमा हिँड्ने कुनै पनि व्यक्तिलाई ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिने जनाएको छ । केरलाको वयानाद प्रहरी प्रमुखले बुध`बार सो जानकारी दिएका हुन् ।
केरला प्रहरी ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार मास्क नलगाउने सबै नागरिकलाई यो कानुन बमोजिम जरि`वाना गराइने जानकारी दिएका हुन् । त्यसै गरी यस कानुनबाट सर्व`साधारण नागरिक मात्र नभएर त्यहाँका पसले तथा सबै नागरिकलाई जरीवाना दिने बताइएको छ ।
पसलमा आउने सबै ग्राहकलाई पनि स्यानि`टाइजर उपलब्ध गराउनु`पर्ने तथा दुरी कायम गरेर पसल सञ्चालन गर्नुपर्ने नियम पनि बनाइएको केरला प्रहरीले जनाएको छ ।
केही दिनयतादेखि भार`तमा पनि कोरोना भाइरसका विरामी`हरुको सं`ख्या बढ्दै गएपछि यहाँका विभि`न्न राज्यले रोक`थामका उपायहरु कडा पारेका छन् । यसै अनुरुप केरला प्रहरीले पनि यस्तो प्राव`धान ल्याएको बताइएको छ । पसलमा आउने सबै ग्राहकलाई पनि स्यानि`टाइजर उपलब्ध गराउनु`पर्ने तथा दुरी कायम गरेर पसल सञ्चालन गर्नुपर्ने नियम पनि बनाइएको केरला प्रहरीले जनाएको छ ।
केही दिनयतादेखि भार`तमा पनि कोरोना भाइरसका विरामी`हरुको सं`ख्या बढ्दै गएपछि यहाँका विभि`न्न राज्यले रोक`थामका उपायहरु कडा पारेका छन् । यसै अनुरुप केरला प्रहरीले पनि यस्तो प्राव`धान ल्याएको बताइएको छ ।